Aiza no hisakafoanana any Lisbonne | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | gastronomy, Lisboa, Ocio
La Ny renivohitr'i Portugal dia toerana izay tsidihina matetika noho ny hatsarany, noho ny fahitana ny arabeny fa amin'ny gastronomic matsiro ihany koa. Tanàna tsy mila jerena an-tongotra fotsiny izy io, fa manasa antsika ihany koa mba hijanona amin'ireo trano fisakafoanana maro ananany. Ankoatr'izay dia tsy mila mandany vola be ianao raha te hihinana tsara any Lisbonne.
Andao hojerentsika hoe inona avy ireo lovia an'ny Gastrozika portogey izay azontsika tsapaina amin'ny trano fisakafoanana. Ianao koa dia mila mahita ny sasany amin'ireto toerana ireto izay azo antoka fa lasa toerana fitsidihana. Satria tsy tokony hohadinointsika fa ny gastrolojia dia ampahany lehibe amin'ny dia an-tongotra.
1 Inona no hohanina any Lisbonne
2 Aiza no hisakafoanana any Lisbonne
2.5 Divay divay
Inona no hohanina any Lisbonne
Ny fahalalana ny toerana halehantsika raha te hihinana tsara isika dia manan-danja mitovy amin'ny fahafantarana ny zavatra tiana hohanina. Gastrozika Portiogey dia feno lovia matsiro sy tsindrin-tsakafo fanta-daza, noho izany dia mendrika ny hazava tsara momba izay zavatra tiana hosedraina rehefa mandeha any amin'ny trano fisakafoanana isika. Ny lovia misy cod dia betsaka, satria izy io dia iray amin'ireo mpiorina kintana ao aminy, ary koa trondro hafa. Aza adino ny kilometatra amoron-tsiraka any Portugal. Ny bacalhau á bras dia kofehin-koditra, ny bacalhau á lagareiro dia endasina ary ny bacalhau com natas dia vita amin'ny crème. Fa ao amin'ny lohan'ny trondro misy sardinina, protagonista ihany koa ny salmon na ny tuna.
Na dia malaza sy tena ilaina aza ny lohan-trondro dia misy ihany koa ny hafa vita amin'ny hena. Iray amin'ny sakafon'izy ireo kintana no kisoa alentejana. Ity hena ity dia vita amin'ny hodi-kazo sy ovy, misy fangaro tena izy. Ny zavatra hafa azontsika andramana ao Lisbon dia ny vellum natsatsika, izay henan'omby natsatsika, na ny frango natsatsika, izay akoho natsatsika, kilasika izay tsy mahomby mihitsy.
Misy koa lovia malaza be toy ny caldo verde, izay lasopy laisoa. Isan'ireo tsindrin-tsakafo ataon'izy ireo dia tsy afaka manadino ny pasta isika, izay mofomamy vita amin'ny crème miaraka amin'ny siramamy misy menaka sy kanelina vovoka. Ireo sakafo matsiro ireo dia tsy maintsy andramana vao vita. Ny zava-mamy hafa dia mofomamy atody Alentejo, vary mamy na bolo de bolachas, mofomamy biskoitra mangatsiaka.
Aiza no hisakafoanana any Lisbonne
Ao Lisbon dia afaka mahita trano fisakafoanana manokana isika fa misy toerana maro azo hanina tsara amin'ny vidiny roapolo euro na latsaka. Aza adino koa ireo trano fisakafoanana kilasika izay ahafahanao mankafy fado ihany koa, ny mozikany malaza indrindra. Andao hojerentsika ny sasany amin'ireo mety mahaliana.
Ity dia trano fisakafoanana an'ny rivo-piainana milamina sy tena mahazatra izay hihinanana sakafo Portiogey mahazatra. Izy io dia trano fisakafoanana iray izay eo akaikin'ny manodidina an'i Chiado ary misy ihany koa fahandroana raha toa ka mpaka hena na trondro isika. Ankoatr'izay, manana menio goavambe izy io raha tsy azontsika antoka izay tadiavintsika.
Ity trano fisakafoanana ity dia any Casa de Linhares sy ny anarany izay midika hoe cod amin'ny saosyRehefa voaomana ny lovia Portiogaly mahazatra indrindra dia manome antsika ny hevitry ny trano fisakafoanana. Miatrika toerana mahazatra izahay hanandramana ny lovia portogey tsara indrindra. Saingy ity toerana ity dia manana ny mampiavaka azy fa ao aminy no ahafahantsika mihaino ny iray amin'ireo fero portogey lehibe koa rehefa manandrana sakafo Portiogey izahay.
Raha izay tadiavintsika dia a trano fisakafoanana maoderina miaraka amin'ny atmosfera be pitsinyAvy eo isika dia afaka mandeha any Parque Eduardo VII hisakafo hariva ao amin'ny Eleven. Nosokafana tamin'ny taona 2004 izy io ary androany dia trano fisakafoanana izay iray amin'ireo maoderina indrindra hanandramana sakafo gourmet Portiogaly vita amin'ny lovia ara-potoana ihany miaraka amin'ireo lovia matsiro sy vaovao. Ao amin'ity trano fisakafoanana ity dia tsara kokoa hatrany ny mamandrika mialoha.
Este trano fisakafoanana manokana dia hita ao amin'ny trano fanatobiana entana nohavaozina izay nametrahana bara sy trano fisakafoanana fotsiny izy ireo, fa faritra sushi sy toerana hanaovana hetsika ary koa efitrano fampirantiana. Toerana maoderina miaraka amin'ny fomba fijery tsara ny renirano.
Ity habaka ity dia trano fanatobiana entana efa taloha izay novaina ihany koa mba hanomezana toerana maoderina. Amin'ity toerana ity dia azonao atao ny manandrana ny fisafidianana divay Portiogey tsara indrindra ary koa divay eran-tany. Izany no antony maha toerana mety azy ho an'ireo tia an'io zava-pisotro io izay manome lanja fatratra ny tany Portiogey. Ny làlan'ny fanandramana divay dia voalamina eto raha liana amin'ilay lohahevitra izahay. Ary koa, raha hiaraka amin'ny olona tsy misotro divay isika, dia misy zava-pisotro hafa toy ny dite ary manolotra toast sy antsipiriany hafa koa izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » gastronomy » Mihinana any Lisbonne
Dia nankany amin'ny Rocky Mountains
Kenya sy ny vakoka manerantany